+မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘေးတွက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းနှင့် myME အဖွဲ့ တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ - Citizen of Burma Award
You are here: Home / COBAArchives / Archive-2015 / +မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘေးတွက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းနှင့် myME အဖွဲ့ တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းနှင့် myME အဖွဲ့ တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ရာ
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၇ ရက် နေ့က myME ရုံး တွင်
ရေဘေးအတွက် ကူညီပေးမည့် ပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းနှင့် myME အဖွဲ့တို့မှ လုပ်အားပေးများဖြင့် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။
အများပြည်သူများက ကူညီသည့် ပစ္စည်းများကို ဧရာဝတီ တိုင်းတွင်းရှိ ညောင်တုန်း၊ သက်ကယ်ကျွန်း နှင့် အင်္ဂပူ မြို့များသို့ သြဂုတ်လ ၉ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ အရောက်ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(ပူးတွဲပါ ဓါတ်ပုံများမှာ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၇ ရက် နေ့က myME ရုံး တွင် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းနှင့် myME အဖွဲ့တို့မှ လုပ်အားပေးများဖြင့် ပြင်ဆင်နေပုံ)
Donated food and emergency supplies from #COBA Chapters and families arrived to #myMEproject office yesterday(August 6,2015) . COBA members, myME members and devoted volunteers will be heading over to Irrawaddy Delta region; Nyaung-Don (ညောင်တုန်း), Thet-Ke-Kyun (သက်ကယ်ကျွန်း), and Ingapu (အင်္ဂပူ) on Sunday to hand them over to flood victims.
August 9, 2015February 1, 20200
အင်္ဂပူ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ ( သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် )Helping for flooding in Myanmar